Maxaa kusoo kordhay dagaalkii Dhuusamareeb? | Keydmedia
Maxaa kusoo kordhay dagaalkii Dhuusamareeb?
Wasaarardu waxey Ciidamada Dowladda Federaallka ugu baaqday in ay ilaaliyaan xasiloonida deegaanada ay ka hawlgalaan, iyadoo la baarayo sababta keentay isku dhacaas iyo haddii ay jirto dhibaatooyin bulshada ka soo gaaray shaqaaqadaas.
DHUUSAMAREEB, Soomaaliya - Wasaaradda Amniga Galmudug ayaa war kasoo saartey dagaalkii Maanta Ciidamo kawada tirsan dowladda Soomaaliya ku dhexmaray gudaha magaalada Dhuusamareeb, kaasoo kusoo beegmaya xilli ay socoto dedaallada nabadeynta degaanka.
"Wasaaradda Amniga Gudaha Gamudug waxey u saartay guddi baaritaan iyo xaqiiqo raadin ah shaqaaqo iyo gacan ka hadal muddo kooban ku dhexmartay laba Ciidan Maanta magaalada Dhuusamareeb," ayaa lagu yiri qoraalka Wasaaradda.
Inkastoo aysan Wasaaradda Amniga ka hadlin khasaaraha, haddana warar Keydmedia Online ka helayo dad ku sugan magaaladda ayaa sheegaya in 7 ruux oo shacab ay ku jiraan ay ku dhaawacmeen iska horimaadkii maanta dhacay.
Labada Ciidan oo kala ah Nabad Sugid iyo Booliska Haramcad ayaa ku dagaalamay meel ku dhaw xarunta Inji, waxayna isku adeegsadeen hub culus, sida ay kusoo warameen goobjoogiyaasha. Dagaalka ayaa billowday kadib markii Ciidamada Haradcad ay kahor istaageen kuwa Nabad Sugida inay maraan wado ay jidgooyo u taallo.
Madaxweyne Qoor-Qoor ayaa tan iyo markii la doortey horaantii sanadkan qaadey tallaabooyin dhanka nabadda iyo dib u heshiisiinta beelo mudo ku dagaalamayay degaanno katirsan Galgaduud, isagoo sidoo kale mideeyay siyaasiyiin mudo isku hayay siyaasadda Galmudug.